Global Voices teny Malagasy » Netizen Report: Afaka Mampiasa Ny Google Ve Ny Governemanta Ao Brezila Mba Hanodikodinana Ny Hevitry Ny Besinimaro? · Global Voices teny Malagasy » Print
Netizen Report: Afaka Mampiasa Ny Google Ve Ny Governemanta Ao Brezila Mba Hanodikodinana Ny Hevitry Ny Besinimaro?
Voadika ny 09 Febroary 2018 6:51 GMT 1	 · Mpanoratra Netizen Report Team Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Hetsi-panoherana manohitra an'i Temer tany São Paulo, ny volana Aogositra 2016. Rovena Rosa/Agência Brasil tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
Manolotra ny topi-maso momba ny fanamby, ny fandresena ary ny fironana vaovao amin'ny zon'ny Aterineto manerana izao tontolo izao ny Advox Netizen Report.
Nilaza ny lahatsoratra iray nivoaka tamin'ny 12 Janoary  tao amin'ny tranonkalan'ny O Globo  , iray amin'ireo gazety malaza be mpamaky indrindra any Brezila, fa mikasa ny hiara-hiasa amin'i Google ny governemanta Breziliana mba hamolavolana ny valin'ny fikarohana ho an'ireo mpisera Breziliana, arakaraky ny toerana misy azy ireo sy ny tranga misy hafa ihany koa.
Araka ilay lahatsoratra tao amin'ny O Globo, izay tsy nanonona ny nahazahoany ny loharanom-baovao dia fantatra fa mikasa ny hamolavola ny valin'ny fikarohana mifandraika amin'ny volavolan-dalànan'ny fanavaozana momba ny fisotroan-dronono ny governemanta , izay hofidian'ny Kongresy ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mbola nanao fanambarana ampahibemaso momba izany ny Google .
Nitatitra ny O Globo fa nihaona tamin'ny solontenan'ny Google ny mpikambana ao amin'ny governemantan'ny Filoha Michel Temer tamin'ny voalohandohan'ny volana Janoary mba hiresaka momba ny fomba handefasana ny fangatahan'ny mpisera any amin'ny votoaty ofisialy novokarin'ny governemanta. Hoy ny lahatsoratra:
Toy izao no mety ho fomba fiasan'izany: hahita ny votoaty izay manazava fa tsy ho voakasik'ity volavolan-dalàna vaovao amin'izao fotoana ity ny sokajin'ny mpiasa any ambanivohitra rehefa mikaroka momba ny fanavaozana ny fisotroan-dronono.
Anisan'ny drafitra miharihary indrindra mampiseho ny jadon'i Temer ny volavolan-dalàna fanavaozana ny fisotroan-dronono ratsy laza izay mikendry ny hitantanana ny volam-panjakana ho eo ambany fifehezany. Hatramin'ny faramparan'ny taona 2016, niady mafy mba hanohanan'ny  Kongresy ilay volavolan-dalàna ny governemanta, ary nanolotra volavolan-dalàna iray hafa maivana kokoa. Vao mainka niha-sarotra ny fanamby amin'izao fotoana izao satria manahy ireo mpanao lalàna fa hanimba ny herijikany ho voafidy indray amin'ny fifidianana amin'ny volana Oktobra ny fankatoavana ny volavolan-dalàna toy izany.
Raha manaiky ny tolokevitra toy izany ny orinasa Google dia hanozongozona ny filazany teo aloha momba ny tolotra omeny. Tao anatin'ny fanamby maro ara-pitsarana, anisan'izany ny tranga marobe tao Brezila , nanamafy ny mpisolovavan'i Google fa ny “milina fikarohana” dia “mpanelanelana tsy miandany amin'iza na amin'iza” sy rafitra algorithmika natao hampisehoana amin'ny mpisera ireo vaovao “manan-danja”, araka ny kajikajy natao mba hamantarana ny vaovao manan-danja …
Miteraka fanontaniana manan-danja momba ny Marco Civil da Internet ao Brezila, na ny Rafitra Sivily ho an'ny Aterineto ihany koa ity hevitra ity. Lany tamin'ny taona 2015, fotoana fohy talohan'ny nanombohan'ny dingan'ny fitsipaham-pitokisana ny Filoha teo aloha Dilma Rousseff, miaro ny tsy fitongilanan'ny tambajotra  amin'ny alàlan'ny fandraràna ny “fanavakavahana na fanimbana ny zotra noho ny tanjona ara-barotra ny lalàna ary mamela izany noho ny hamehana sy ny voina mahazo ny vahoaka.” Tsy miresaka miharihary amin'ny votoatim-panavakavahana noho ny tanjona politika izany.
Manarama olona mba hampiroborobo ny teti-panorony sy mandrahona ny mpanohitra azy ny governemanta fiaraha-mitantana ao Ethiopia
Tafaporitsaka ny andiana antontan-taratasy avy amin'ny governemanta sy ny fandraketana karajia ‘tchat’ ary navoakan'ny loharanom-baovao ahiahiana ho ao anatin'ny fitondrana ihany. Nanambara ilay loharanom-baovao fa manarama ny mpisera ao amin'ny media sosialy  ny governemanta Etiopiana mba hanjakazakana amin'ny resadresaka amin'ny aterineto miandany amin'ny governemanta. Anisan'ireo antontan-taratasy ireo ny lisitr'ireo olona sy ny vola nomena azy ireo ho an'ny fanehoan-kevitra manohana ny governemanta sy natao hanoherana ny mpanohitra. Mpiasam-panjakana avokoa ny ankamaroan'ireo olona ao amin'ny lisitra. Mifanaraka amin'ny fanentanana mihantsy antserasera, manohana ny governemanta, manohitra ny mpanohitra, izay nifanandrify tamin'ny firongatry ny teny fankahalana antserasera sy ny fanenjehana mpanao gazety tsy miankina ny fanambarana .
Mandrahona ny tambajotram-pifandraisan'ny vondrom-piarahamonina amin'ny tsy fandoavan-ketra ireo mpandrindra Meksikana
Mety ho voatery hampitsahatra ny asany  Ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany, fikambanana Meksikana voalohany sady tokana amin'ny mpanome tolotra ho an'ny vondrom-piarahamonina tompotany, rehefa nitaky tamin'izy ireo iray tapitrisa pesos ny mpandrindra ny fifandraisana nasionaly ao Meksika ho an'ny maridrefin'ny onjampeo izay ampiasainy. Nangataka ny fanafoanana ny fandoavana izany ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany satria tsy mitady tombontsoa izy ireo ary tsy mampiasa izany ara-barotra, ary izany rahateo dia efa nekena tao anatin'ny fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana voalohany. Nolavina ny fangatahan'izy ireo herintaona taty aorian'ny nanombohan'ny asa. Manohitra ilay fanapahan-kevitra ny vondrona.
Nitarina tamin'ny mpiasan'ny Oniversite tao Jammu sy Kashmir ny fandraràna ny media sosialy tsy hilaza vaovao
Tamin'ity herinandro ity, nahafantatra ny mpampianatra sy ny mpiasa tao amin'ny Oniversiten'i Jammu, any amin'ny fanjakana Avatratr'i India Jammu sy Kashmir fa ho ampiharina amin'ireo mpiasan'ny oniversite ihany koa ny fitsipika tamin'ny taona 2017 izay mametra ny mpiasam-panjakana amin'ny karazana kabary ao amin'ny media sosialy. Milaza ity fitsipika tamin'ny taona 2017  ity fa “tsy tokony hanao fitondran-tena mandrahona, tsy mendrika, tsy araka ny foto-pisainana na mahamenatra ao amin'ny media sosialy izay mety hanohintohina ny governemanta ny mpiasam-panjakana.”
Manana ny lalàna momba ny Fidirana malalaka amin'ny Fampahalalam-baovao i Iran ary mikasa ny hanomboka hampiasa izany i Rouhani
Mety hahatonga  ny governemanta hampihatra ilay lalàna momba ny Fidirana malalaka amin'ny Fampahalalam-baovao, izay nolaniana tamin'ny taona 2009 ny hetsi-panoherana tany Iran tamin'ny faran'ny volana Desambra satria tsy mbola nampiharina tanteraka izany. Taorian'ny hetsi-panoherana, nanao lahateny mikasika ny maha-zava-dehibe ny mangarahara amin'ny fitantanana ny governemanta ny Filoha Iraniana Hassan Rouhani ary nilaza hoe: “Tsy manana fomba hafa ankoatra ny mangarahara isika mba hamongorana ny kolikoly; Tsy maintsy miditra ao anatin'ny efitra fitaratra iray isika mba hahafahan'ny olona rehetra mahita ny asa ataontsika. “
Voasakan'ny sivana ny sambo rendrika noho ny lalàna manohitra ny kabarim-pankahalana tany Alemaina
Nanakana ny kaontin'ny  gazetiboky mpanesoeso Titanic ny Twitter noho ny fampiharana ny lalàna alemà vaovao manohitra ny kabarim-pankahalàna, NetzDG. Nakatona nandritra ny 48 ora ny kaontin'ilay gazetiboky taorian'ny namoahany indray ny lahatsoratra iray efa nofafana izay nanao fanesoana ny sioka mamely ny Miozolomana nataon'ilay mpanao politika alemà avy amin'ny elatra farany havanana , araka ny Columbia Journalism Review. Nanome ny sehatry ny media sosialy 24 ora ny lalàna mba hanesorana ireo hafatra notaterin'ny mpisera fa tsy ara-dalàna.
Mikasa ny hiady amin'ny fanodikodinam-baovao amin'ny fomba hafa ny Fanjakana Britanika
Nametraka ny tetikasa natokana ho an'ny fiarovam-pirenena  ny governemanta Britanika mba hiadiana amin'ny fanodikodinam-baovao ataon'ireo olom-panjakana, izay ao anatin'ny fanadihadiana momba ny fanambaràna fa niditra tamin'ny fampielezan-kevitry ny referandaoma Brexit 2016 i Rosia. Tsy mbola nisy ny antsipiriany fanampiny nambara momba ny asan'ny vondrona vaovao.
Mihaino tsara noho izay iheverantsika azy ny NSA
Nanambara ny tatitra vao haingana avy amin'ny The Intercept fa manana teknolojia izay afaka mamantatra ny olona amin'ny alàlan'ny feony izay voarakitra ao anaty rakitra tokana antsoina hoe “voiceprint” ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-pirenena Amerikana . Mifototra amin'ireo dosie voasokajy tamin'ny taona 2004 ka hatramin'ny 2012 ny tatitra ary nanambara fa nampiasa ilay teknolojia tamin'ny hetsika manohitra ny fampihorohoroana hatramin'ny fanafihan'ny Amerikana an'i Iràka tamin'ny taona 2003  ny sampam-pitsikilovana amerikana. Ny tatitra dia milaza ny tranga ara-pitsarana momba ny zon'ny fiainana manokana, indrindra satria miseho amin'ny endrika miavaka ao amin'ny lahatahiry biometrika ireo mpamaritra feo.
Nilaza ny Firenena Mikambana fa maro kokoa ny olona no mila fidirana malalaka amin'ny Aterineto, indrindra fa ny vehivavy
Nanambara ny tanjona vaovao ho an'ny taona 2025 ny Vaomieran'ny tosaka aterineto haingana ao amin'ny Firenena Mikambana mba hanohanana ny fampivelarana ny fidirana amin'ny aterineto erantany, miaraka amin'ny tanjona mba hampifandraisana ny 50%-n'ny olona eto amin'izao tontolo izao izay tsy misy aterineto ankehitriny. Mikendry ny handrisika ireo firenena mba hametraka ny drafitra nasionaly momba ny aterineto haingam-pitosaka ny tanjona 2025  ka mba hahatonga ny fahafahana miditra amin'ny aterineto ho mora kokoa sy hampitombo ny fahafahana manangana ny fahaiza-manao nomerika.
Nampidina ny tahan'ny “fahafahana miditra” amin'ny aterineto avy amin'ny 5% mankany amin'ny latsaky ny 2%-n'ny vola miditra isam-bolana (GNI) isam-batan'olona ihany koa ny vaomiera, izay maneho ny hantsana ara-pidiram-bola. Ny Alliance for Internet Affordable no nanolotra ireo soso-kevitra ireo voalohany tao amin'ny tatitra nataony tamin'ny taona 2016 momba ny Fahafahana Miditra amin'ny Aterineto . Mitaky ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatra rehetra amin'ny fampiasana aterineto ihany koa ny tanjona ary mihevitra fa vondrona tsy afaka mahazo tombontsoa firy amin'ny toekarena nomerika ny vehivavy sy ny tovovavy.
Afef Abrougui , Ellery Roberts Biddle , Mohamed ElGohary , Rohith Jyothish , Inji Pennu , Karolle Rabarison , Elizabeth Rivera , Taisa Sganzerla , sy Sarah Myers West  no niara-nanoratra ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/09/114616/
 lahatsoratra iray nivoaka tamin'ny 12 Janoary: http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/governo-avalia-parceria-com-o-google-pela-reforma-da-previdencia.html
 O Globo: https://en.wikipedia.org/wiki/O_Globo
 niady mafy mba hanohanan'ny: https://www.reuters.com/article/us-brazil-pensions/brazil-government-presents-softer-pension-reform-bill-idUSKBN1DN08M
 ny tranga marobe tao Brezila: https://advox.globalvoices.org/2016/11/22/brazil-superior-court-rules-in-googles-favor-against-right-to-be-forgotten/
 miaro ny tsy fitongilanan'ny tambajotra: http://www.cgi.br/pagina/decreto-n-8-771-de-11-de-maio-de-2016/294
 manarama ny mpisera ao amin'ny media sosialy: https://advox.globalvoices.org/2018/01/20/leaked-documents-show-that-ethiopias-ruling-elites-are-hiring-social-media-trolls-and-watching-porn/
 voatery hampitsahatra ny asany: https://advox.globalvoices.org/2018/01/22/the-first-mobile-phone-network-for-indigenous-communities-in-mexico-is-under-threat/
 Milaza ity fitsipika tamin'ny taona 2017: http://risingkashmir.com/news/after-gag-govt-orders-creation-of-social-media-cells
 Mety hahatonga: https://advox.globalvoices.org/2018/01/24/protests-underscore-the-potential-power-of-irans-access-to-information-law/
 Nanakana ny kaontin'ny: https://cpj.org/blog/2018/01/as-german-hate-speech-law-sinks-titanics-twitter-p.php
 Nametraka ny tetikasa natokana ho an'ny fiarovam-pirenena: https://inews.co.uk/news/politics/government-set-fake-news-unit-combat-disinformation/
 Sampan-draharahan'ny Fiarovam-pirenena Amerikana: https://theintercept.com/2018/01/19/voice-recognition-technology-nsa/
 fanafihan'ny Amerikana an'i Iràka tamin'ny taona 2003: https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War#2003:_Invasion
 ny tanjona 2025: http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/wef2018.pdf
 tatitra nataony tamin'ny taona 2016 momba ny Fahafahana Miditra amin'ny Aterineto: http://a4ai.org/affordability-report/report/2015/#redefine_%E2%80%9Caffordability%E2%80%9D_with_income_and_gender_inequalities_in_mind